Ụbọchị My Pet » 7 Ihe I Kwesịrị Ịmara Tupu mkpakọrịta nwoke na nwaanyị a Foodie
emelitere ikpeazụ: oké osimiri. 28 2020 | 2 min agụ
Mgbe mụ onwe m anọghị a nnukwu ofufe nke nri, Ọtụtụ ndị enyi m na akara ụbọchị ndidi onwe-kwusara foodies. Okwu a apụtaghị naanị pụtara na-ewere foto nke ihe oriri na agha chee ya na-elekọta mmadụ media. Foodies na-riri ahụ nri, na ọ bụ ebe m mmekọrịta na foodies ebe m mụtara nnọọ ókè ha ga-ejekwara nri.
Food bụ ihe niile
Ha riri oriri na-akarị ihe ọ bụla na i nwere ike image. Food bụ mbụ na ikpeazụ mkpa nke ụbọchị. Na, ọ dịghị akara mmasị ịchọta “zuru okè” nri item. Njikere njem dị anya n'ihi nnọọ ekwesị strawberries.
Foodies bụ ọkachamara n'ihe banyere nri pairings. Ọ bụrụ na ha atụ aro na-eri azụ na osikapa ma ọ bụ agwakọta abụọ sauces ọnụ, -aga na ya. Ohere inweta bụ ha aro ga-emeghe anya unu ka a ọzọ flavorful efere.
Foodies na-agbasaghị-esi ísì flavors site nwayọọ nwayọọ akatabi okop ha nri. Mgbe a nwere ike ụda enweghị isi, ọ n'ezie ga-enyere gị aka ịghọta ihe oriri ndị ọzọ nke n'aka nke nwere ike irite uru mmekọrịta gị.
Ma ọ bụ Yelp ma ọ bụ Google, ozugbo mgbe na-agbalị a ọhụrụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ ma ọ bụ efere, gị foodie ga-aghọ gabiga ókè obi ụtọ banyere ede a nyochaa maka dị ka a foodie, ha na-eche a ibu ọrụ na-agwa ndị ọzọ foodies nke ọhụrụ ha hụrụ chọpụtara.
Akpara oge gị gburugburu na-eri
Ụbọchị na-ejegharị ejegharị ga dabeere nri. Ohere na-na ha emewo a ịwụ ndepụta nke ga-agbalị efere na ụlọ oriri na ọṅụṅụ. indulge ha, anya na ndepụta na-ahọtakwara a ole na ole n'ime ndị ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ị chọrọ iyi.
Foodies ghọọ ezi ndị enyi na sava na ha mmasị ụlọ oriri na ọṅụṅụ. Ọ bụghị nanị na ha abụọ ga-esi dị ná mma n'elu nri ma na-amata a server pụrụ iduga ego na / ma ọ nzuzo efere. Ọzọkwa, -enwe a ọkacha mmasị nkesa pụtara nanị na-aga na-na ụlọ oriri na ọṅụṅụ mgbe na ihe nkesa na-arụ ọrụ.
nri ehihie na abalị
Ọ bụghị nanị na gị foodie amasị iri nri si ma ha ga-akasị abụ na-abụ nnọọ kemfe na kichin. Mgbe ị na-agbalị na-atọ ụtọ Ezi ntụziaka, foodies ga- “furu efu” na kichin ruo ọtụtụ awa. Mgbe ha na-esi na nri na ọnọdụ, M atụ aro na isonyere ha na kichin na-anọrị.
Mgbe niile mara na ọnọdụ nke a nri ụlọ ahịa
Ị dịghị mara mgbe ọ pụrụ ịdị mkpa ihe. Foodies bụghị naanị ịma ebe ezigbo ndị nri ụlọ ahịa bụ ma ha ga-amarakwa awa. -Akwadebe ime ikpeazụ nkeji nri ụlọ ahịa na-agbaba.
-Akpa a foodie bụ mgbe niile na-eyikwa egwu. Site na-amakụ ha crazy-dị ka iri mmadụ ahụ, ị ga-maa-adị agụụ na-agụ maka ịhụnanya ọzọ.
Mesie Gị Online dịwara Profaịlụ Photo
7 Echiche Ụgha Banyere Mmekọahụ